मेलम्चिको पानी अाएछ कि क्या हाे ! - Everest Dainik - News from Nepal
मेलम्चिको पानी अाएछ कि क्या हाे !
काठमाडौँको चावहिलस्थित सडकमा मेलम्ची खानेपानी आउनका लागि पाइप बिछ्याएले फैलिने अत्याधिक धुँलो हटाउन राखिएको पानीले गर्दा हिलाम्मे सडक अनि त्यसमाथि गुडिरहेको गाडी । हिलोले सडक मात्रै होइन, सडकपेटीमा सर्वसाधारणलाई हिड्नसमेत सास्ती भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस उपत्यकामा रातमा सार्वजनिक सवारी नहुँदा यात्रु हैरान